कोरोनाका कारण क्षयरोगी संख्या बढ्ने, उन्मूलन लक्ष्य पाँच वर्ष धकेलिने – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २ गते १२:३४
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस डिजिज (कोभिड–१९) को महामारीका कारण नेपालमा क्षयरोगीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। लकडाउनका कारण अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थाको सेवा अवरुद्ध रहेको छ।
नियमित रूपमा औषधी सेवन नगर्दा झ्न कडा खालको क्षयरोग (टिबी) र संक्रमित व्यक्तिमार्फत अन्य व्यक्तिलाई सर्ने जोखिम हुन्छ।
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. अर्जुन भट्टचनले कोरोना महामारीको कारण नेपालमा क्षयरोगीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको बताए। क्षयरोगीका बिरामी नियमित रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र आएका छन् कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ।
केन्द्र तथा प्रदेशमा भएका जनशक्ति परिचालन गरेर स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्यांक केलाएर हेर्ने गरेका छौं,’ डा. भट्टचनले भने, ‘क्षयरोगीको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं ।’
उन्मूलनको लक्ष्य ५ वर्ष पछि धकेलिने
सन् २०३५ सम्म नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, कोरोनाको महामारीको कारण उन्मूलन लक्ष्यको ५ वर्ष समयसीमा थपिनसक्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। यसले क्षयरोग उन्मूलनको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थपिदिएको छ।
विकट ठाउँमा रहेका क्षयरोगीका बिरामीहरू अहिले स्वास्थ्य संस्थासम्म आइपुग्ने अवस्था छैन। नियमित रूपमा औषधी सेवन नगर्दा क्षयरोगीको संख्या झन् विकराल हुने देखिन्छ।
अहिले जिन एक्सपर्ट मेसिनका अधिकांस सेवा अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ। जसले गर्दा सम्भावित संक्रमित व्यक्ति परिचाहन हुनमा थप समस्या थपिदिएको छ। ‘ जिन एक्सपर्टका सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्,’ डा. भट्टचनले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणमा थप रणनीतिमार्फत काम हुँदै छ।’
समयमा नै क्षयरोगीको पहिचान हुन नसकेमा एक संक्रमित व्यक्तिबाट १ वर्षमा १० जनासम्म संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको हुन्छ।
केही समयअघि गरिएको प्रि–ब्यालेन्स सर्वेले क्षयरोगीको संख्यामा ५० प्रतिशत बढ्ने अनुमान देखाएको थियो। २ वर्ष लगाएर देशभर ९० हजार मानिसमा गरिएको सर्वेले हालको क्षयरोगी संख्यामा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने आँकलन गरिएको थियो।
यस्तो महामारीका बेला संक्रमितका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्ने नसकिए र क्षयरोगीका बिरामीलाई नियमित औषधी सेवनको दायरामा नल्याए विकराल अवस्था आउने डा. भट्टचनको आँकलन छ।
‘गाइडलाइनअनुसार एकपल्टमा एक महिनाका लागि औषधी दिने गरेका छौं। अहिलेसम्म राम्रो सँग सेवा सञ्चालन भइरहेको छ,’ डा. भट्टचनले भने, ‘महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा थप समस्या हुने देखिन्छ।’
भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने औषधी ल्याउन नपाए थप समस्या हुन्छ। यद्यपि त्यसको व्यवस्थापन आफूहरू लागिरहेको उनले जानकारी गराए। सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा क्षयरोगीको संख्या ४५ हजार रहेको अनुमान छ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन १८ देखि २२ जनाको क्षयरोगले ज्यान लिने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष ७ देखि १२ हजार नेपालीले क्षयरोगका कारण मृत्युवरण गरिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ। साबिककै रूपमा कार्यक्रम चलाइराख्ने हो भने नेपालले २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनको अन्त्य हासिल गर्न नसकिने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञको दाबी छ।
त्यसमध्ये ३३ हजारमा मात्र रोग पहिचान भएको छ। बाँकी १२ हजार उपचारको दायरामा आएका छैनन्। संक्रमितमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन्।
क्षयरोग उन्मूलनमा लक्ष्य पूरा गर्ने ठूलो चुनौती नै रहेको डा. भट्टचनको भनाइ छ। ‘अहिले महामारीले केही कुरा सिकाएको छ। स्वास्थ्यको संरचनादेखि प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उन्मूलनको लक्ष्यका लागि यो महामारी अवसर पनि हुनसक्छ।’
हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत ४ हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रहरूबाट डिओटिएस उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यसैगरी ६ सय ४ प्रयोगशाला, ६७ वटा जिन एक्सपर्ट केन्द्र र २ वटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालामार्फत क्षयरोगको निदान सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। सरकारले क्षयरोगको सम्पूर्ण उपचार सेवा भने निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
Tags: क्षयरोग, क्षयरोगी, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र